चीन पूर्व खोल्ने ट्रली र मिसिन निर्माता र आपूर्तिकर्ता गठन रोलिङ को straightener लोड | ZHONGTUO
वर्ग वर्षा पाइप मिसिन झुकयो संग मिसिन बनाउन ...
ट्रली र रोल को straightener लोड पूर्व खोल्ने ...
पूर्ण स्वचालित भारी कर्तव्य purline मिसिन स्ट्याकर च ...
इस्पात फ्रेम मिसिन गठन प्रणाली-रोलिङ
पूर्व-खोल्ने लोड ट्रली र निर्मित मिसिन रोलिङ को straightener
ट्रली र निर्मित मिसिन रोलिङ को straightener यो पूर्व-खोल्ने लोड ट्रली लागि? Normalling धेरै बाक्लो तार लागि बोल्ने, के प्रयोग गरिन्छ लोड पूर्व खोल्ने, यो decoiler गर्न तार राख्दै को झुकन शक्ति छ रूपमा पछि तार जारी गर्न कठिन छ एकदम बलियो। को तार जारी गरेपछि सामाग्री टाउको मान्छे चोट वा तार बाउन्स अन्य place.Then यो उपकरण आवश्यक छ बनाउन बाउन्स र सजिलो हुनेछ। 3.0mm तलको तार मोटाइ लागि, सामान्यतया बोल्ने, यो neces छ ...
यो पूर्व-खोल्ने लोड ट्रली लागि के प्रयोग गरिन्छ ?
बोल्ने धेरै बाक्लो तार लागि, Normalling, यो decoiler गर्न तार राख्दै को झुकन शक्ति एकदम बलियो छ रूपमा पछि तार जारी गर्न कठिन छ। को तार जारी गरेपछि सामाग्री टाउको मान्छे चोट वा तार बाउन्स अन्य place.Then यो उपकरण आवश्यक छ बनाउन बाउन्स र सजिलो हुनेछ। 3.0mm तलको तार मोटाइ लागि, सामान्यतया बोल्ने, यो आवश्यक छ।
स्वचालित डिग्री अनुसार, पूर्व-खोल्ने लोड ट्रली र निर्मित मिसिन रोलिङ को straightener पनि केही मतभेद छ। ZHONGTUO चिसो रोलिंग मशीनरी गठन लागि, हामी दुई प्रकार छ:
पूर्व-खोल्ने लोड ट्रली र straightener को सरल संस्करण :
संरचना सुविधा: गैप पुल हाइड्रोलिक लचिलो मंच, हुन्छन् थिचेर टाउको र uncoiling रोलर्स। पाना straightener जान्छ uncoiling पछि स्वतः। Tempering संग रोलर्स सीधा र गर्मी उपचार जो सतह कठोरता सुधार chroming र खुरदरापन। त्यहाँ पिन्च रोलर्स र सीधा रोलर्स छन्। दवाब रोलर्स व्यक्तिगत समायोजित गर्न सकिन्छ।
पूर्व-खोल्ने लोड ट्रली र निर्मित मिसिन रोलिङ को straightener को उच्च संस्करण :
पूर्व-खोल्ने लोड ट्रली, सीधा मिसिन
यो प्रणाली तार को uncoiler पठाइएको छ जब बाहिर पट्टी टाउको लिन्छ कि एक पूर्व-unwinding सिस्टम छ। Unwinding लागि सेव समय। को लोड ट्रली इस्पात तार वहन र इस्पात लिफ्टहरु को uncoiler को मुख्य शाफ्ट गर्न तार। को लोड ट्रली एक हाइड्रोलिक मोटर द्वारा संचालित छ। एउटा सक्रिय घुमाउँदा रोलर पूर्व-खोल्ने समयमा घुम्ने गर्न तार ड्राइव गर्न लोड ट्रली माथि माउन्ट छ।
को ट्रली लिफ्ट एक हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा संचालित छ। एक बेल्चा टाउको उपकरण, एक सीधा टाउको यन्त्र, फिड रोलर र clamping यन्त्र लोड ट्रली छेउमा प्रबन्ध छन्। को बेल्चा टाउको उपकरण मा बेल्चा टाउको विस्तार र कम, र उठाने र lowering को हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा नियन्त्रित छन्।
सोझो रोलर को leveler मा सजिलो प्रविष्टि लागि पट्टी टाउको समतल प्रयोग गरिन्छ र एक हाइड्रोलिक सिलेंडर नियन्त्रित छ। कार XY निर्देशांक स्वतः लोड नियन्त्रण गर्न निम्नानुसार
कार लोड संग र गोही टाउको संग डबल टाउको को uncoiler। यो तार को परिक्रमा समर्थन गर्न प्रयोग गरिन्छ। मुख्य शाफ्ट फैलयो र कडा छ को पछिल्लो एक हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा। को तार राखिन्छ छ पछि, पिन्च रोलर राखिएको छ एक हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा तार मा। को तार reducer मा माउन्ट एक मोटर द्वारा संचालित छ शीर्ष। को पट्टी को पिन्च leveler मा खुवाइन्छ छ। यो unwinding वायवीय ब्रेक लगान प्रयोग गर्दछ। को uncoiler माथि, त्यहाँ रोल रोक्छ एक दबाव रोलर छ। को uncoiler गर्न सकिन्छ पूरै पछाडिको हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा अनुवादित, को पीएलसी माथिल्लो फिड नियन्त्रित छ, र विधुतीय फोटो पत्ता लगाउने स्वतः slows।
अघिल्लो: गठन मिसिन रोलिङ लागि पूर्ण स्वचालित थ्रेड र वेल्डिंग सिस्टम
अर्को: रेल लागि पन्चिङ प्वालहरू भएको धातु Interlocked पाइप
10 टन लागि कार लोड संग हाइड्रोलिक decoiler ...
चरण टाइल बनाउने मिसिन , स्टड ट्रैक मिसिन , धातु छत बनाउन मशीनरी , रोलिंग सटर ढोका रोल मशीनरी बनाउने बनाउन , Hg50 ट्यूब रेखा, छत पाना टाइल बनाउने मिसिन,